Off and on: 2010
जनताका समाचार हुन्नन ?
हामीले दिनदिनै भोग्ने
दु:खको हिरासतमा जाकेर,
एउटा 'लेबल' टाँस्न मन छ
तीनका हेड्लाइनका टाउकामा
" जनताका समाचार हुन्नन ? "
Labels: जनताका समाचार हुन्नन ?
बार्ता-बार्ता खेलौँ ;
बानेश्वोरको ठुलो घरभित्र
ठुलाहरु खेल्छन ,
हामी बाहिरै खेलौँ
खेलाची नै त हो सबै
आउ, संबिधान संबिधान खेलौँ !
यत्रा मिडिया छन,
हाम्रो रमाइलो नि पक्कै देखाउँछन
at 11/19/20105comments:
हुस्सुको बैंस देखेर
घाम लजाउँदै ...
किन माथि लुकेको
तल ओर्लिएर हेरे पो ;
एकैछिनमा बिलाउनु छ आखिर
अजम्बरी हुन्छ र !
यो मनको जुट्पत्तिमा
जोकर लगाउन मन छैन
बाजी नभए नहोस्
जित- हारको के कुरा
जे पनि हुन्छ !
घरि घरि ....
'भारी' भईराख्ने यो मन
असरल्ल छोडिदिन मन लाग्छ
मेरो 6-लेनको सडकमा
कस्तो मिठो दुर्घटना
मेरो 'सोमबारे' जिन्दगी ;
जती पल्ट आओस
जीवन भरी मलाई
'नोस्टल्जिक' हुन पुग्छ !
Labels: बिना शिर्षक
अनी मेरो रात
एउटै ओढ्नेको दुई कुना
तानातान गरेर ओढे जस्तो,
चन्द्रमाको उज्यालोले मातेर
किन छेक्ने होला
मेरो प्रेयसीको मुहार
मलाई पढिराख्न मन लाग्छ
त्यो आँखाको बोलाई
ओठका सुन्दर चाल्
रेशमी नभएर होइन
तैपनी मेरो रिस
मलाई निस्फिक्र चुम्न नदिने,
दुई गालामा थिग्रिएको
लाजका सुन्दर रङ
भर्खर ब्युँझेको बालक जस्तै
कल्पनाको कुरा न हो
मेरो के साईनो
कण कण मा भेट्छु !
Labels: तिम्रो न्यानोपन
आउ रोपाईं गरौं
आउ रोपाईं गरौ,
दबदबे हिलो नभएर के भो
आली र समाहा नभएर के भो
मनको बाँझो टारीखेत
अहिले अली अली भिजेको छ,
कयौं रातका आँशु साक्षी छन
आउ रोपाईं गरौं !
किन जर्जर हुन दिने,
साउन लाग्ला भदौ लाग्ला
खडेरीमा गाह्रो हुन्छ फेरी,
म सम्याउदैं छु छेउ कुना
संगै रोपौ न है
Labels: आउ रोपाईं गरौं
न बैंसको उन्मुक्तता
न यौबनको मादकता
न जवानीमा मोहकता
म देख्छु फेरी पनि
उनको सुन्दरता !
न उछ्रिन्खल आधुनिकता
न पुरातन संकीर्णता
न हीउँ जस्तो चेहरा
एउटा आम सरलता
यो जेठको धूपमा
शितल बादलको रुपमा,
कल कल मुलको पानी
पिउँदै जानी नजानी
रसाउँदै यो आँत
खोलन दिलको बात !
एक्लै कती गनौँ,
म मात्र कती भनौँ !
at 6/18/2010 1 comment:
Labels: कती भनौँ
यतै कतै छ्यौ र ?
भनी दिन मन लाग्छ
म यहिँबाट सुरु हुन्छु !
कती बेला पछीको समय
रात हो !
चुक घोप्टिएको आकाश
मनको ट्युब लाइट
तैपनी उज्यालो लाग्छ
तिमी यतै कतै छ्यौ र ?
Labels: यतै कतै छ्यौ र ?
तिमीलाई जुन मन पर्‍यो ?
प्रीय त्यसलाई उज्यालो अर्कैले दिन्छ,
जुन कहाँ देखिएला !
मस्त फक्रेको फुल ;
फोहोर माटोमा गाडीएको
मलजल नदीए ,
कसरी फक्रिएला त्यो,
फेदै नभए टुप्पोमा के पलाउला !
at 5/27/2010 1 comment:
Labels: के पलाउला
के के फिर्ता चाहन्छौ तिमी !
के के फिर्ता चाहन्छौ तिमी
त्यो स्वछन्द हाँसो
त्यो सुँक्क सुँक्क रोदन
घन्टौं खर्चेर बुनिएका
भबिश्यका सुन्दर सपना,
त्यो जन्मदिनको उपहार
सबै सँग लुकाएर
दिने गरेको प्यार
माया गर्न ,
केबल माया गर्न
भोगेका दु:ख पिडा,
केबल एक झल्को
हिंडेको बाटो सिधा
के के फिर्ता चाहन्छौ तिमी,
समाजसँग मानेका ति
लाज, डर र त्रास
एउटा सुन्दर घरको आस !
मेरा लागि तिमी ;
कहिले अर्धाङिनी जस्तै .....
कुन चाँही भोगाइ
फिर्ता चाहन्छौ तिमी !
अरुले चित्त दुखाइदिदां
सँगइ बसेर रोएको
आफ्नै मन मैँलिदा
साना खुशीले धोएको;
सबै चिज छन म सँग !
एक दर्जन सपना
सबै छन म सँग
at 5/06/20103comments:
आधा छु एक्लो छु, खै के को माझमा छु
सुन्यता वरिपरी छ, लाग्छ सधैं साँझमा छु
मदिराको साथ लिदाँ, नजाती मनले हेर्छन
त्यसै बैरी देख्ने, यही पापी समाजमा छु
रात रात बिताँउछु, खेल्दै शब्दसँग
गजलभित्रै रुमल्लिने, फजुल कामकाजमा छु
आधा छु एक्लो छु ,खै के को माझमा छु
at 4/12/2010 1 comment:
आफुले नरोजेको कुरा
आफुले नखोजेको कुरा
किन अङगाल्न खोज्दैछौं
किन प्यारो मान्दैछौं,
यो एक्लोपन !
अमुर्त कला जस्तै
हेर्यो ... फर्कियो ;
बादलका टुक्रा जस्ता
अजिब समयको 'प्लट' ;
कस्तो खहरे यो ;
at 4/07/2010 1 comment:
म बडो 'कन्फ्युज' छु
टाँसिन मिल्ने ,
ओत लाग्न मिल्ने
अली ठुलो छाती !
'फ्लेक्शिवल' मन ;
देउताले बनाइ दिएको
आफुले मेहनतले भेट्टाएको
छ फिटको ज्यान,
छाती माथि रुन्थ्यौ ,
कहिले आँसुका ,
तातोपन ताजै छ !
त्यो व्यङ्ग्य थियो कि
at 4/06/20106comments:
Labels: म बडो 'कन्फ्युज' छु
बे टाइममा लाग्यो
ग्रह हरु आमने सामने हुँदा
सीधा रेखामा पर्दा
कालो धब्बा !
दुई मनको सीधा रेखा
कहिल्यै सोझिएन ,
मिलाऊं न अझै भनेर
त्यसैले त कहिले काहीं ,
बे टाइम मै
लाग्दो रहेछ ग्रहण ,
आकाशको ग्रहण के ग्रहण
मनको ग्रहण पो ग्रहण ;
उज्यालीन नसक्ने ,
सधै अँधेरो ,
बे टाइमको !
छैन र कोही
हिंड्ने त्यो ढङ्ग
नहोस है भङ्ग
छैन र कोही ?!
यो मनलाई छोइ !
Labels: छैन र कोही